Daniyeli 3 | IBhayibheli Elikuyi-Internet | INguqulo Yezwe Elisha
3 UNebukhadinezari inkosi wenza umfanekiso+ wegolide, okuphakama kwawo kwakuyizingalo ezingamashumi ayisithupha nobubanzi bawo buyizingalo eziyisithupha. Wawumisa ethafeni laseDura esifundeni sombuso saseBhabhiloni.+ 2 Futhi uNebukhadinezari ngokwakhe njengenkosi wathumela ukuba kuhlanganiswe ababusi bezifunda, izinduna+ nababusi, abeluleki, abagcini-zikhwama, abahluleli, izimantshi ezingamaphoyisa+ nabo bonke abaqondisi bezifunda zombuso ukuba beze ekuvulweni+ komfanekiso uNebukhadinezari inkosi ayewumisile. 3 Ngaleso sikhathi ababusi bezifunda,+ izinduna nababusi, abeluleki, abagcini-zikhwama, abahluleli, izimantshi ezingamaphoyisa, nabo bonke abaqondisi bezifunda zombuso babebuthana ngenjongo yokuvulwa komfanekiso uNebukhadinezari inkosi ayewumisile, futhi babemi phambi komfanekiso uNebukhadinezari ayewumisile. 4 Ummemezeli+ wayememeza kakhulu ethi: “O nina zizwe, maqembu ezizwe nezilimi+ kuthiwa, 5 ngesikhathi enizwa ngaso umsindo wophondo, igemfe, ihabhu elizintambontambo, ihabhu elingunxantathu, insimbi yomculo enezintambo, umtshingo nazo zonke izinhlobo zezinsimbi zomculo,+ niwe phansi nikhulekele umfanekiso wegolide uNebukhadinezari inkosi awumisile. 6 Noma ngubani ongawi phansi akhuleke+ uyophonswa ngawo lowo mzuzwana+ esithandweni somlilo esivuthayo.”+ 7 Ngenxa yalokhu, ngaso leso sikhathi njengoba bonke abantu babezwa umsindo wophondo, igemfe, ihabhu elizintambontambo, ihabhu elingunxantathu, insimbi yomculo enezintambo nazo zonke izinhlobo zezinsimbi zomculo, zonke izizwe,+ amaqembu ezizwe nezilimi babewa futhi bekhulekela umfanekiso wegolide uNebukhadinezari inkosi ayewumisile. 8 Ngenxa yalokhu, ngaso leso sikhathi amaKhaledi athile asondela abeka amaJuda icala.+ 9 Akhuluma, athi kuNebukhadinezari inkosi: “O nkosi, phila kuze kube nini nanini.+ 10 Wena ngokwakho nkosi, ukhiphe umyalo wokuthi wonke umuntu ozwa umsindo wophondo, igemfe, ihabhu elizintambontambo, ihabhu elingunxantathu, insimbi yomculo enezintambo, nomtshingo nazo zonke izinhlobo zezinsimbi zomculo,+ kufanele awe phansi futhi akhulekele umfanekiso wegolide; 11 nokuthi noma ngubani ongeke awe phansi akhuleke kufanele aphonswe esithandweni somlilo esivuthayo.+ 12 Kukhona amaJuda athile owamise ukuba engamele ukuqondiswa kwesifunda sombuso saseBhabhiloni,+ uShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego; la madoda anamandla awazange akunake wena nkosi, awabakhonzi onkulunkulu bakho, futhi umfanekiso wegolide owumisile awawukhulekeli.”+ 13 Ngaleso sikhathi uNebukhadinezari, ngokuthukuthela nangokufutheka,+ wathi makulethwe uShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego.+ Ngenxa yalokho la madoda anamandla alethwa phambi kwenkosi. 14 UNebukhadinezari wakhuluma wathi kuwo: “O Shadiraki, Meshaki no-Abhedinego, ingabe kunjalo ngempela, ukuthi nina anibakhonzi onkulunkulu bami,+ nomfanekiso wegolide engiwumisile aniwukhulekeli?+ 15 Manje uma nikulungele ukuthi lapho nizwa umsindo wophondo, igemfe, ihabhu elizintambontambo, ihabhu elingunxantathu, insimbi yomculo enezintambo, nomtshingo nazo zonke izinhlobo zezinsimbi zomculo,+ niwe phansi nikhulekele umfanekiso engiwenzile, kulungile. Kodwa uma ningawukhulekeli, nizophonswa ngawo lowo mzuzwana esithandweni somlilo esivuthayo. Futhi ngubani lowo nkulunkulu onganophula ezandleni zami?”+ 16 UShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego baphendula, bathi enkosini: “O Nebukhadinezari, akunasidingo sokuba sikuphendule ngokuqondene nalokhu.+ 17 Uma kumelwe kube njalo, uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uyakwazi ukusophula. Uyosophula esithandweni somlilo esivuthayo nasesandleni sakho nkosi.+ 18 Kodwa uma kungenjalo, makwazeke kuwe, nkosi, ukuthi onkulunkulu bakho akubona onkulunkulu esibakhonzayo, futhi umfanekiso wegolide owumisile ngeke siwukhulekele.”+ 19 Khona-ke uNebukhadinezari wagcwala ukufutheka, futhi isimo sobuso bakhe sabashintshela oShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego. Wakhuluma wathi isithando somlilo masibaselwe ngokuphindwe kasikhombisa ukwedlula inkambiso ebilandelwa yokusishisisa. 20 Futhi wathi emadodeni athile anamandla+ ayesebuthweni lakhe lempi, mawabophe uShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego, ukuze abaphonse esithandweni somlilo esivuthayo.+ 21 Khona-ke la madoda anamandla aboshwa egqoke iziphuku zawo, izingubo nezigqoko nezinye izembatho, aphonswa esithandweni somlilo esivuthayo. 22 Ngenxa nje yokuthi izwi lenkosi lalinonya futhi isithando somlilo sishisiswe ngokweqile, la madoda anamandla athwala uShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego yiwo abulawa yilangabi lomlilo. 23 Kodwa lawa amanye amadoda anamandla, womathathu, uShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego, awela phansi eboshiwe phakathi kwesithando somlilo esivuthayo.+ 24 Ngaleso sikhathi uNebukhadinezari inkosi wethuka futhi wasukuma ngokushesha. Wakhuluma wathi ezikhulwini zakhe eziphakeme zasebukhosini: “Abengemathathu yini amadoda anamandla esiwaphonse emlilweni eboshiwe?”+ Zaphendula zathi enkosini: “Kunjalo nkosi.” 25 Wakhuluma wathi: “Bheka! Ngibona amadoda amane ehambahamba ekhululekile phakathi emlilweni, futhi awalimele, futhi ukubonakala kweyesine kufana nokwendodana yonkulunkulu.”+ 26 Khona-ke uNebukhadinezari wasondela emnyango wesithando somlilo esivuthayo.+ Wakhuluma wathi: “Shadiraki, Meshaki no-Abhedinego, nina zinceku zikaNkulunkulu oPhezukonke,+ phumani nize lapha!” Ngaleso sikhathi uShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego babe sebephuma emlilweni. 27 Ababusi bezifunda, izinduna nababusi nezikhulu eziphakeme+ zenkosi ababehlangene babewabona la madoda ukuthi umlilo wawungabanga namandla emizimbeni yawo,+ kungekho nalunwele lwekhanda lawo+ olwaluhangukile, ngisho neziphuku zawo zazingazange zishintshwe nephunga lomlilo ngokwalo lalingazange lihlale kuwo. 28 UNebukhadinezari wakhuluma wathi: “Makatuswe uNkulunkulu kaShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego,+ othumele ingelosi yakhe+ yophula izinceku zakhe ezithembele kuye+ futhi ezishintshe izwi lenkosi ngokwalo zanikela imizimba yazo, ngoba zingenakukhonza+ futhi zingenakukhulekela+ noma yimuphi unkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu wazo.+ 29 Futhi ngikhipha umyalo,+ wokuthi noma yimuphi umuntu wanoma yisiphi isizwe, iqembu lesizwe noma ulimi, osho noma yini embi ngoNkulunkulu kaShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego kufanele ahlahlelwe,+ futhi indlu yakhe kufanele iphendulwe indlu yangasese yomphakathi;+ njengoba nje engekho omunye unkulunkulu okwaziyo ukukhulula njengalona.”+ 30 Ngaleso sikhathi inkosi ngokwayo yenza ukuba uShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego bachume esifundeni sombuso saseBhabhiloni.+